अब ठूलो पुँजी भएको अर्थपूर्ण मर्जर आवश्यक:: Artha Dabali
हामीले मर्जरमा ढिला गर्यौं भने यो जटिल भएर पछि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनसक्छ
पर्शुराम कुँवर क्षेत्री, सीइओ, जनता बैंक
नेपाल बैंकबाट १९८६ मा बैंकिङ क्षेत्रमा आफ्नो करियर शुरु गरेका बैंकर्स पर्शुराम कुँवर (क्षेत्री) त्यसपछि सिटिजन्स बैंकमा आवद्ध रहे ।
यसरी नै तत्कालिन बैंक अफ एसिया, ग्रायण्ड बैंक हुँदै हाल जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा कार्यरत छन् ।
पोखरा घर भएका सीईओ कुँवर बैंक वित्त क्षेत्रमा सफल बैंकर्स मानिन्छन् । आफूलाई अध्यात्मबादी धार्मीक भन्न रुचाउने सीईओ कुँवर ज्योतिष शास्त्रमा विशेष विस्वास राख्छन् । भगवानप्रति आस्था राख्ने उनी पर्नजन्ममा उत्तिकै विस्वास गर्दछन् ।
सेक्रेट कुरा उनी क्रिकेटका खेलका फ्यान हुन् । यस्तै, बैंकीङ करियरमा आफूलाई खुशी व्यक्त गर्दछन् । अर्थ डबलीले गरेको लामो कुराकानीमा देशको अर्थतन्त्र र बैंकवित्त क्षेत्र र यसको सेरोफेरोमा सीईओ क्षेत्रीले खुलेर यस्तो बताए ।
विमल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप यस्तो छ :
सरकारसँग वित्तीय क्षेत्रको खास अपेक्षा के छ ?
बैंकिङ क्षेत्रबाट सुझाव दिनुपर्दा पहिलो कुरा मर्जरको विषय हो । बैंकहरु मर्जर गर्दा ट्याक्स छुट दिनुपर्छ । यो सामान्य संस्थाको मर्जरको विषय होइन । ठूलो पुँजी भएको अर्थपूर्ण मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट दिन आवश्यक छ । हामीले यो सुझाव सरकारसमक्ष पेस पनि गरिसकेका पनि छौँ ।
यसको अर्थ, तपाई बिग मर्जरको पक्षमा हुनुहुन्छ ?
हो, म अझै कन्सलटेसन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । जनता बैंकका १ सय ३० वटा शाखा छन् । काठमाडौंमा १६ शाखा छन् । त्यसैले म बारम्बार काठमाडौंबाहिर गइरहेको हुन्छु । आफैँ पुगेर शाखाको अवस्थाबारे बुझ्ने गरेको छु । मैले सानो ठाउँ र थोरै जनसंख्या भएको क्षेत्रमा पनि ८–१० वटा बैंकका शाखा देखेको छु ।
कुनै पनि बैंकको प्वाइन्ट अफ भ्युबाट हेर्ने हो भने जहाँ पूर्वाधारको विकास भएका सम्भावित ठाउँ छन्, त्यहाँ शाखा खोल्ने इच्छा हुन्छ । त्यसो गर्दा त्यहाँ धेरै बैंकका शाखा हुने नै भए । तर, त्यसबाट हामीले कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । यस बारेमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ, त्यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । पारदर्शी हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा धेरै कर बैंक क्षेत्रबाटै उठाउने गरिएको छ । पारदर्शी पनि हुनुछ र उसैलाई पेनाल्टी पनि, यो त उपयुक्त भएन नि !
तर, वित्तीय संस्थाको पारदर्शीतामाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ?
ठीक छ । कहीँ समस्या होला । हामी अझै पारदर्शी हुन जरुरी छ । भ्याट ऐन आइसकेपछि सुधार आइरहेको छ । मध्यमस्तरको व्यवसायमा भने अझै यो समस्या देखिन्छ । यसलाई सुधारेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । हामीलाई सरकारले जसरी ध्रुमपान र मद्यपानमा कर लगाउँदै आएको छ, त्यसकै हाराहारीमा कर असुल्दै आएको छ, यसकारण बैंकहरूसँग लिने कर शुल्क कम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसैगरी, बजेटमा हामीले आशा गरेको अर्को कुरा स्थानीय तहले दिएको ५० प्रतिशत पैसामात्रै बैंकले राख्न पाउने भनिएको छ । किन ५० प्रतिशतमात्रै ? यसको तर्क के ? सय प्रतिशत दिन किन नमिल्ने ? सय प्रतिशत नै दिने हो भने अहिले जुन क्रेडिट डिमान्ड बढेको छ, त्यसमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ । यसले त आर्थिक वृद्धिमा नै फाइदा पुग्ने हो ।
सरकारले टार्गेट गरेको भन्दा त अझै हामी नियन्त्रणमै छौँ । अहिलेको क्रेडिट डिमान्ड मिट गर्न जुन रिसोर्स मोबिलाइजेसनको चुनौती छ, त्यसका लागि स्थानीय तहको सय प्रतिशत पैसा नै मोभिलाइजेसन गर्न दिनुपर्छ ।
अर्को कुरा, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सेयर जारी गर्दाको खर्चलाई खर्च मानिरहेको छैन । पहिले मान्थ्यो तर, अहिले भने मान्दैन । सेयर जारी गर्दाको खर्चलाई खर्च नमान्नु गलत छ । कुनै ऐन कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने हो भने त्यो गरेर पनि यो मिलाउनुपर्छ ।
नमान्नुको कारण के हुनसक्छ ?
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यसलाई पुँजीगत मान्छ । त्यसकारण नमिलेको उहाँहरुको तर्क छ । यो पुँजीगत त हो तर सम्पत्ति होइन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । सामान्य अन्योल हो भने मिलाउन सकिन्छ तर ऐनमा नै कन्फ्युजन हो भने त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षसम्म यो समस्या थिएन ।
हरेक क्षेत्रले युवापुस्तालाई बाहिरिनबाट रोक्नुपर्छ भनिरहेको छ, सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?
सरकारले बजेटमार्फत यो कुरालाई सम्बोधन गरिसकेको छ । अब हामीले गर्ने हो । युवालाई तालिम दिएर सीपयुक्त बनाउनुपर्छ । किनभने, पैसामात्रै ठूलो कुरा होइन । कर्जामात्रै होइन, सीप पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो कुरा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ भने दोस्रो उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन सक्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रले के–के गर्ने त्यो पहिचान हुनुपर्छ ।
जनता बैंकले २२ स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार गरिरहेको छ । त्यो भनेको त्यहाँका लागि हामी राष्ट्र बैंक नै हौं ! हामी त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिसँग बसेर काम गरिरहेका छौँ । त्यस्तै, अन्य ठाउँमा पनि हामीले शाखा विस्तार गरेका छौँ । हामीले ग्राहकलाई सरकारले तपाईंलाई के–कस्तो सुविधा दिएको छ ? कति अनुदान उपलब्ध गराएको छ ? योजना तथा प्रोजेक्ट कसरी र कस्तो बनाउने ? कति बजेट आवश्यक छ ? कति तपाईंले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ? बैंकसँग कति कर्जा लिनुहुन्छ ? कति वर्षमा कर्जा तिर्नुहुन्छ ? कति कमाइ हुनसक्छ ? जस्ता विषयमा तालिम दिन सक्छौँ । सरकारले प्रमाणपत्र पनि देला तर त्यतिले पुग्दैन । अन्य धेरै विषय छन्, जसलाई सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको पैसा बैंकमा छ, बैंकहरूको नाफा पनि उच्च छ तर पनि तरलताको असहज अवस्था भइरहने, यस्तो किन हुन्छ ?
एकपटक तपाईंहरूले बैंकहरूको रिर्टन अन क्यापिटल÷रिर्टन अन इक्विटी पनि हेरिदिनु होला । कम्पनीले १० करोड लगानी गरेर पाँच करोड कमाएको छ भने उसको रिर्टन अफ इक्विटी त ५० प्रतिशत भयो नि ! त्यस्तै, एक अर्ब लगानी गरेर २० करोड रुपैयाँ कमाएको छ भने रिर्टन अफ इक्विटी २० प्रतिशतमात्रै हो । जनता बैंककै प्रतिसेयर आम्दानी जम्मा १७ रुपैयाँ छ । त्यसमा ७९ प्रतिशत कटाउँदा कति बाँकी हुन्छ ? सेयर होल्डरहरूले तपाईंले त फिक्स्ड डिपोजिट बराबर पनि दिनुहुन्न भन्छन् ।
बैंकहरू पारदर्शी छन् र तिनले नाफा कमाइरहेका छन् भने हामी खुसी हुनुपर्छ । यही कुरा विदेशी लगानीकर्तालाई सेल गर्न सक्नुपर्छ, आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रा बिजनेसले नाफा कमाए भनेर रुने–धुने काम गरेर कसैलाई फाइदा हुँदैन । मेरो विचारमा सबै बिजनेस नाफामुखी हुनुपर्छ । सेयरधनीलाई पनि केही डिभिजनहरू दिनुपर्छ । हामीले करोडौँ फिगर हेर्ने होइन कि रिर्टन अन इक्विटी हेर्नुपर्छ ।
बैंकहरूलाई नाफा कमाउनैपर्ने बाध्यता छ तर जनअपेक्षा अनुसार बैंक अघि बढ्न नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ नि ! यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो एकदमै नकारात्मक धारणा हो । राष्ट्र बैंकले अहिले जम्मा कर्जाको १० प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा लगानी गर भनेको छ तर सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने यो असाध्यै कम हो । जिडिपीमा कृषिले पु¥याएको योगदानको आधारमा यो १० प्रतिशत त धेरै कम हो । तर पनि बैंकहरूलाई १० प्रतिशत लगानी गर्न किन समस्या छ ? जनता बैंकलाई कुनै समस्या छैन किनभने जनताको शाखा गाउँ–गाउँमा पुगेको छ । कृषिक्षेत्रमा तोकिएअनुसार लगानी गरिरहेका छौँ । यद्यपि, सबै बैंकहरूलाई यो नीति सहज भएको छैन । हामी बैंकले कर्जा दिएनमात्रै भन्छौँ तर किन दिएन भन्ने कुराको खोजी गर्दैनौँ । यो कुरा आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न तँछाडमछाड गर्ने बैंकहरू कृषिमा लगानी गर्न चाहँदैनन् किनभने त्यो क्षेत्र जोखिमपूर्ण छ । कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी हुनुपर्छ । कृषिमा लगानी बढाउन केही कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ कि ! कसैलाई गाली गरेर आलोचना गरेरमात्र समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।
मुलुकको आयात–निर्यात व्यापारबीचको खाडल झन् चुलिँदो छ, निर्यात बढाउन के गर्नुपर्ला ?
यो हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या हो । यो समस्या एकरातमा सुरु भएको होइन र एक रातमा समाधान पनि हुनेवाला छैन । २०५२ सालदेखि २०७५ सालसम्मको अवधिमा केही पनि भएन । देश द्वन्द्वको भुमरीमा फस्यो । यो समयमा लगानीको वातावरण नै भएन । १० वर्ष यसरी नै बित्यो । त्यसपछिको अर्को १० वर्ष राजनीतिक अस्थिरता रह्यो । दुई पटक संविधानसभाको चुनाव भयो ।
यसले अर्थतन्त्रमा नराम्ररी प्रभाव पा¥यो । गाउँघरमा युवा बस्ने वातावरण नै बनेन, यसकारण उनीहरू पलायन हुन थाले । तत्कालीन सरकारले विदेश जाने युवालाई कर्जा देऊ भनेपछि हामीले कर्जा दियौं । यसकारण बाँझो हुने क्रम बढ्यो । देश आयातमुखी बन्न पुग्यो । यो संरचनात्मक अवस्था त्यहीँबाट सुरु भएको हो । त्यो समयमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेनौँ । अझै पनि आवश्यक परेको बेलामा मल पाइँदैन । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर अहिले कृषि रणनीति आएको छ । अपेक्षा गरौँ, आगामी दिनमा यो समस्या समाधान हुँदै जानेछ ।
समाजमा दुई वर्ग छन्– एउटा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी र मलेसिया पुग्छन् र अर्को अस्ट्रेलिया, अमेरिका पुग्छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
मेरो विचारमा यी सबै विकासका प्रक्रिया हुन् । हाम्रो अर्थतन्त्रले सकारात्मक प्रभाव पार्दै जाओस्, यो समस्या आफैँ समाधान हुन्छ । आर्थिक प्रगति हुँदै गयो भने बिदेसिएका पनि फर्किन्छन् । केही हदसम्म यो देखिएको पनि छ । इन्डियामा पनि यो समस्या थियो पछि आफैँ समाधान हुँदै गयो । नेपालमा पनि अवसर छ भन्ने कुराको अनुभूत भइरहेको छ । राम्रो हुने संकेत देखिएको छ । राजनीतिक स्थिरता छ । दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा हामी छौँ । यसको सामान्य प्रभावले पनि हामी विकास गर्न सक्छौँ । राम्रो नीति बनाउन सक्यौं र त्यसको परिपालन राम्रो भयो भने मेरो विचारमा हामीले दुःख पाउने यो पाँच वर्षमात्रै हो । म आशावादी छु ।
नेपालीहरू कामका लागि बिदेसिएका छन् भने नेपालमा विदेशबाट कामदार माग गर्नुपर्ने स्थिति छ, यो समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ?
हामीले सीप नजानेको मान्छे विदेश नै पठाउनु हुँदैन । सीप नभएका धेरै मान्छेले थोरै पैसा ल्याउँछन् । सीप नभएका मान्छेलाई सीप सिकाउनुपर्छ । नेपालमै राम्रो हुन्छ भने हामी हाम्रा सन्तानलाई किन विदेश पठाउँछौँ र !
सरकारले यस्तो अवस्थामा दोहोरो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ ! यो सम्भव होला ?
अवश्य पनि सम्भव छ भन्ने लाग्छ । हामीले सुशासनमा जोड दिनुपर्छ । नीति नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अझै पनि अदालतप्रति हाम्रो विश्वास टुटेको छैन । रुल अफ ल ले काम गर्नुपर्छ । जोसुकै होस्, कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । कानुनी राज्य निर्माण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्छ । यी सबै कुरा सम्बोधन गर्ने हो भने विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् । दिगो विकासका लागि जतिसक्दो धेरै लगानीको आवश्यकता छ । विदेशी लगानीकर्ता आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । दोहोरो आर्थिक वृद्धि असम्भव छैन ।
उत्पादनशीलभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी बढिरहेको छ ? यसमा बैंकका सीईओहरूको भूमिका कति छ ?
हामीलाई गाडी चाहिँदैन भने किन ल्याउने ? बन्द गरिदिए हुन्छ नि ! कर्जा लिएर गाडी किन किन्नुहुन्छ ? तपाईं घरबाट निस्कनसाथै गाडी पाउनुहुन्छ भने २४सै घन्टा गाडीको सुविधा छ भने तपाईं ऋण लिएर गाडी किन्नु हुन्छ र ! किन्नुहुन्न नि ? बैंकले गाडी किन्न कर्जा दियो भनेर गाली गर्नुको सट्टा, त्यसको कारण खोज्नुपर्छ । गाडी आवश्यक छैन भने रोक्नुपर्छ । तपाईं जति नियन्त्रण गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यति विकृति आउँछ । राज्यले राजस्व सबैभन्दा बढी आउने भएकाले गाडी आयातमा रोक नलगाउन सक्छ । यो त्यति सजिलो पनि छैन किनभने राज्यले आयात रोक्दा ठूलो मात्रामा राजस्व गुम्छ भने नरोक्दा पुँजी बाहिरिइरहेको छ ।
उद्यमका लागि कर्जा माग गरिएको फाइलभन्दा व्यापार गर्नका लागि माग गरिएको कर्जाको फाइल छिटो सर्छ नि बैंकमा ?
बैंकको पनि बिजनेस हो । कहाँ लगानी गर्दा सुरक्षित हुन्छ, त्यहीँ गर्छ । यो स्वाभाविक हो । डुब्ने ठाउँमा कसैले पनि लगानी गर्न खोज्दैन ! कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकको एनटीए जति भए पनि छुट दिने भन्ने नियमावली बनाउनुपर्छ । होइन भने त स्वाभाविक रूपमा जहाँ सुरक्षा छ, त्यही लगानी गर्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आलोचना गर्नुको सट्टा हामीले नीति नियममा सुधार ल्याउनुपर्छ । कृषिमा लगानी गरेबापत आउने ब्याजमा ट्याक्स नलगाउने जस्ता सुविधा हुनुपर्छ ।
लगानी गर्ने त दोस्रो कुरा हो । उद्यमीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सरकारले निश्चित योजना बनाउनुपर्छ । बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतमा सरकारले किसानलाई विशेष सेवा सुविधा दिएको छ । किसानको उत्पादन सरकारले किन्छ तर नेपालमा भने मूल्यमात्रै तोक्ने काम हुन्छ । भनेको समयमा मल त पाइँदैन अनि नेपाली किसानले भने इन्डियन किसानसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।
त्यसमाथि खुला सिमाना छ । यति धेरै ठूला मुद्दा छन्, त्यसबारे कुरै नगरी सिधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै जिम्मेवार देख्छौँ । कृषिलाई ग्ल्यामराइजेसन गर्नुपर्छ ताकि कसैले पनि कृषिलाई वाह ! यसले त खेती गरेछ, वा कृषक बनेछ भन्न सकोस् ।
बैंक मर्जरपछि चुनौती र अवसर के–के आए ?
जनता बैंकको कुरा गर्ने हो भने हामी ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमघटपछि आएका हौँ । हामीले साविकको सिद्धार्थ विकास बैंक र साविकको त्रिवेणी विकास बैंक मात्रै हो तर साविकको सिद्धार्थ बैंकले दुईवटा बैंकलाई मर्ज गरेको थियो– एउटा नेपाल आवास विकास कम्पनी र अर्को एकता विकास बैंक । त्यस्तै, साविकको त्रिवेणी विकास कम्पनीले पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक र ब्राइट डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्ज गरेको थियो । त्यो ६ वटा बैंकमा साविकको जनता बैंक गरी ७ वटा वित्तीय संस्थाको कम्बिनेसन हो ।
चुनौतीको कुरा गर्ने हो भने ती ७ वटा संस्था भनेको ७ फरक–फरक कल्चर हो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख चुनौती हुन आउँछ । ३ अर्बको पुँजी एक वर्षभित्रमा ८ अर्ब भयो । ३५ वटा शाखाबाट ११० वटा शाखा, साढे ३ सय कर्मचारीबाट एक हजार । एकैपटक बैंक ठूलो भयो । त्यो मल्टिकल्चर म्यानेज गर्ने चुनौती, काम गर्ने तौरतरिका मिलाउनु निकै चुनौतीपूर्ण थियो ।
मर्जरअगाडिको फिगर र मर्जरपछिको फिगर हेर्ने हो भने अवसर नै अवसर छ । मर्जरपछि बैंक ठूलो भयो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म उपस्थिति भयो । नेपाली जनताको बैंक जनता बैंक भनेर हामी देशको कुना–कुनासम्म पुग्यौँ । मर्जरमा आएका साना बैंक थिए, जसले गाउँमा बैंकिङ वातावरण सिर्जना गरेका थिए । बैंकले पनि जनता चिन्ने, जनताले पनि बैंक चिन्ने । यसकारण मर्जरपछि उपभोक्तासँग सम्बन्ध स्थापना गर्न तथा विस्तार गर्न धेरै सजिलो भयो ।
कहिलेकाहीँ मलाई बैंकका विभिन्न शाखासँग जोडिएका मानिसले फोन गरेर सुझाव दिनुहुन्छ । हाम्रो देशमा कतिजना सीईओ होलान्, जसले ग्रासरुट लेभलबाट सुझाव प्राप्त गर्छन् । यसकारण मर्जरपछि हामीले प्राप्त गरेको अवसरमध्ये यो पनि एक हो । अझै पनि सुधार गरेर जानुपर्नेछ । जनता बैंकको कुरा गर्ने हो भने मर्जरपछि हामीले चुनौतीभन्दा पनि अवसर पाएका छौँ ।
फोर्स मर्जरमा जाने विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
यसलाई म फोर्स मर्जर मान्दिन किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान आकर्षित गर्ने किसिमको नीति बनाउनुपर्छ । त्यति गर्दा पनि भएन फोर्स नै गर्ने हो । मचाहिँ सकेसम्म फोर्स नगरौँ भन्ने पक्षमा छु । यो विवाह गरेजस्तै हो । सबै बुझेर जानेर राजीखुसीमा गरिएको वैवाहिक सम्बन्ध बलियो भए जस्तै प्राकृतिक रूपमा मिलेर गरिएको मर्जर सफल हुन्छ । बैंकहरू मर्ज गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भने हो ।
२८ वटा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी सबैको शाखा सबै ठाउँमा पु¥याउने हो । मर्जरमा गयौं भने सबै गाउँपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तार गर्न आवश्यक छैन नि ! हामीले मर्जरमा ढिला ग¥यौँ भने यो जटिल भएर जानेछ ।
सबै बैंकले शाखा विस्तार गर्दै जानेछन्, जसका कारण पछि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्न जान्छ ।